Avereno jerena ny vkworld S8, klone an'ny Galaxy S8 miaraka amina endrika mahagaga | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Finday, hevitra
Amin'ity indray mitoraka ity izahay dia mitondra fitaovana avy amin'ny orinasa sinoa tsy dia fantatra loatra izay mikasa ihany koa ny hahazo toerana eo amin'ny tsena eropeana. Vkworld dia manolotra ny smartphone vaovao, ny vkworld S8. Fitaovana vaovao mizara anarana amin'ny tampon'ny tsipika farany an'ny Samsung.
Nomenclature, S8, izay tsy kisendrasendra. Tsy vitan'ny mizara ny anaran'ny maodely farany azy amin'ny Samsung. Raha mijery ny any ambadiky ny fitaovana isika dia hitantsika fa mitovy ny toerana misy ireo singa ao aminy. Noho izany dia mizara fitoviana ara-batana ihany koa izy ireo.
1 Ny vkworld S8, tsy clone hafa an'ny Samsung S8 fotsiny
2 Inona no ao amin'ny boaty vkworld S8
3 Ny famolavolana ny vkworld S8
3.1 Titanium sy vera mora tezitra, fitaovana mendri-kaja ho an'ny vkworls S8
3.2 Ratsy ny toerana misy ny fakantsary eo aloha
4 Pikantsary 5,99-inch goavambe
5 Izahay dia mijery ao anatin'ny vkworld S8
6 Datasheet Vkworld S8
7 Ny fakantsary an'ny vkworld S8
8 Batterie mba tsy hijanona ny gadona
9 Toa tsara ny wkworld S8
10 Fiarovana sy teboka malemy
10.1 Ny mpitsikilo tarehy: mila fanatsarana
11 Ny tsara sy tsara indrindra amin'ny vkworld S8
11.2 Azo hatsaraina
Ny vkworld S8, tsy clone hafa an'ny Samsung S8 fotsiny
Indraindray miasa ny paikadin'ny fampiasana anarana mitovy sy maodely an-tampon'ny kilasy manerantany. Izy io dia afaka manintona ny sain'ireo izay tsy afaka maniry ilay kinova "original" noho ny vidiny. Ary hahita tsara izy ireo raha afaka mahazo iray mitovy aminy. Fa ny ankamaroan'ny fotoana, miantso ny fitaovana ho zava-dehibe indrindra amin'ny sonia mahery vaika dia mety hiverina. Ary izany dia satria miteraka fampitahana eo amin'ny iray sy ny iray hafa.
Ny marina izany ara-batana ny vkworld S8 dia mitovy amin'ny Samsung S8 amin'ny teboka maromaro. Na dia tsy hanao fampitahana amin'izy ireo aza isika. Manaraka izany dia hivezivezy isaky ny teboka izay omen'ny vkworld antsika amin'ity fitaovana ity.
Amin'ny lafiny mahavariana indrindra, eo amin'ny wkworld S8 ny haben'ny efijery goavambe dia manaitra. Panel iray izay mikasika akaiky indrindra ny 6 santimetatra, ary manolotra efijery goavambe 5,99 santimetatra Full HD miaraka amin'ny fiarovana Corning Gorilla Glass nosoniavin'i LG. Ny efijery izay ampiana, ho toy ny lafiny tokony hasongadina, malala-tanana Bateria 5.500 mAh izay horesahintsika manaraka.
Inona no ao amin'ny boaty vkworld S8
Manokatra ny boaty amin'ity smartphone ity izahay, ary toy ny mahazatra, eo amin'ny pejy voalohany no ahitantsika ilay fitaovana. Amin'ny fisamborana azy io aloha mahatsikaritra lanja be isika. Ny lanja izay mihamafy kokoa rehefa afaka mampitaha azy amin'ny telefaona hafa eo akaiky eo isika. ny Batterie 5.500 mAh no tompon'andraikitra, na dia angamba ny fahaleovan-tena arosony aza dia omena ny lanjany be loatra.
Mahita fampiasa tsy fahita firy isika, ary noho ny zava-baovao ananan'ity telefaona ity. Ny vkworld S8 dia misafidy USB Type-C, maoderina kokoa ary heverina ho mahomby kokoa noho ny USB micro mahazatra mahazatra kokoa. Ny fitaovana fanampiny dia tsy iza fa ny "Mini Jack" mankany amin'ny adapter USB Type-C ilaina hampifandray ny headphones. Eny, tao amin'ny wkworld dia nanapa-kevitra ny hanao koa izy ireo raha tsy misy ny hatsaram-panahy amin'ny headphone jack.
Isika koa dia manana ny USB tariby ho an'ny fifandraisana data sy ny famandrihana bateria. Ary ny Matoanteny mampifandray azy amin'ny arus elektrika. Ary tokony hiresaka indray mandeha indray isika tsy fisiana ao anaty boaty an'ny smartphone. Toa hadinon'ny mpanamboatra ny headphones. Mety ho antsipiriany izany raha ampiana ny sasany miaraka amina output USB karazana C manokana.
Na dia tokony ho feno fankasitrahana aza isika mahita ao anaty boaty a Saron'ny silipo izany dia hiarovana ny finday avo lenta vaovao amin'ny minitra voalohany. Ary a mpiaro ny efijery. Sonia iray hafa izay manome antsika ny sokay iray (boaty silikola), ary ny iray fasika (tsy fisian'ny headphone). Mbola tsy very fanantenana isika. Amin'ity taha ity, ny telefaona mampiditra headphone dia mety ho tombony na tombony amin'ireo mpifaninana aminy, avelantsika eo izy.
Ny famolavolana ny vkworld S8
Araka ny efa nomarihinay, ny vkworld S8 dia mampatsiahy tokoa ny anarany Samsung. Na dia misy nuances sy fanavahana sasany aza. Ohatra, ny toerana misy ny entanao any aoriana dia mitovy. Hatrany ankavia sy miankavanana dia ahitantsika ny tselatra LED indroa, ny fakantsary ary ny mpamaky ny dian-tànana. SAINGY misy fahasamihafana lehibe iray, ny wkworld S8 dia manasongadina fakantsary roa, zavatra iray izay mbola tsy nomen'i Samsung ny fitaovana ao aminy.
Efa naneho hevitra izahay tamin'ny tranga izay ny toerana misy ny mpamaky ny dian-tànana, amin'ny ambaratonga anatomika dia mahazo aina kokoa izy noho ny amin'ny tapany voalohany. Nasongadinay koa anefa izany eo akaikin'ny fakantsary ihany no safidy tsara indrindra. Eny, ny solomaso fakan-tsary dia iharan'ny "dian-tànana" izay mety ho zavona na mandoto ny faritra misy ny fakantsary.
Ny firindrana asehon'ireo singa ao aminy dia tsara. Ireo singa telo mifandanja dia tena misehoseho ary tsy misy na iray aza tsy eo amin'ny toerany. Saingy nomena ny safidy, aleonay ny mpamaky ny dian-tànana hita ambany kely noho ny fakantsary. Na dia tsy maintsy ekena aza fa fahombiazana dia fahombiazana.
Ho an'ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanamboarana, vkworld dia nahavita asa tsara. Izay vao jerena toy ny plastika vita amin'ny makirana manjelanjelatra dia mihoatra lavitra noho izany. Momba ny a fitaratra notsaboina miaraka amin'ny fomba 40 samy hafa izay nampiasaina fitaovana hafa mandra-pahatongan'ny fahazoana ny tadiavina.
Titanium sy vera mora tezitra, fitaovana mendri-kaja ho an'ny vkworls S8
Ka eo an-damosiny isika miaraka a fitaratra antonony izay misy takelaka vy ho an'ny famaranana maharitra kokoa aza. Vkworld dia miantoka fa ny lamosina, na dia vita amin'ny vera aza, dia mahatohitra mafy kokoa ny vodilanitra sy ny votra noho ny ankamaroan'ny finday avo lenta. Tena azy tsara dia vita ary toa kanto tokoa.
Ny famaranana miolakolaka amin'ny tapany aoriana dia mampiditra tsara ao a unibody frame vita amin'ny titanium. Ny fampiasana an'ity fitaovana ity, miaraka amin'ny fitsaboana ny vera ao ambadika, dia miteraka a fitaovana maranitra sy manokana. Lafiny iray manandanja rehefa dinihina ny fotoana tsy ihodivirana hianjera amin'ny tany. Ary izany dia manome fangejana lehibe sy mety tsara amin'ny anatomy tanantsika.
Eo alohany no ahitantsika iray amin'ireo efijery lehibe indrindra eny an-tsena amin'ny Smartphone amin'ity habe ity. Ny habeny dia mitovy amin'ny an'ny smartphone misy efijery dimy santimetatra ny habeny. Ary tratra izany noho ny a manao ny ankamaroan'ny tontonana eo aloha miaraka amin'ny tahan'ny fibodoana eo anoloana tontonana 91%.
Ratsy ny toerana misy ny fakantsary eo aloha
Io dia teo amin'ny tapany teo alohany izay nahitako zavatra izay azo eritreretina hoheveriko "snag". Momba izany ny toerana misy ny fakantsary eo aloha. Toy ny fitsipika ankapobeny, dia eo an-tampon'ny lafiny roa amin'ny sensor sy ny fanamafisam-peo no misy azy. Raha izany dia wkworld ahiana ny fametrahana ny fakantsary eo amin'ny farany ambany.
Raha heverina fa ny 15% -n'ny mponina manerantany ihany no tanana havia. Ny ankamaroantsika mpampiasa finday avo lenta dia mampiasa tanana ankavanana mitazona ny telefaona. Ary amin'ny fitsipika ankapobeny, amin'ny toeran'ny tanantsika rehefa mampiasa finday isika, na miditra amin'ny rindranasa izahay, ny faritra misy ilay fakantsary.
Ny fihetsika voajanahary rehefa ampiasaintsika ny fakantsary selfie dia ny mijery ny tampon'ny telefaona. Raha manao izany isika dia mahita ny tenantsika eo amin'ny efijery toy ny mijery ny faravodilanitra. Y ny fanatonana ny tarehy avy any ambany dia tsy foana ny fandokafana indrindra. Mandra-pahazaran'ny olona iray dia sarotra be ny mitady fomba fakana sary voaravaka tsy misy rantsantanana mivoaka.
Na dia ny fampiasana ny famahana ny famantaran-tarehy aza, izay horesahintsika avy eo, ny toe-javatra mijery ambany amin'ny finday dia tsy voajanahary. Amin'izay mba heverinay ho lesoka ny fametrahana ny fakantsary eo ambanin'ny tontonana eo aloha ny fitaovana.
Ao aminy Ankavanana Ny bokotra ihany no ahitantsika ny fanidiana na ny famohana ary ny / off.
Ao amin'ny lafiny ankavia manana ny fanaraha-maso ny fehezan-teny amin'ny bokotra iray lava elongated isika.
Naneho hevitra foana izahay fa rehefa misy orinasa manome "antsipirihany" toy ny tranga silika dia ankasitrahana izany. Ilay iray miaraka amin'ny vkworld S8 dia toa tsara kalitao, ary mifanaraka amin'ny fitaovana toy ny fonon-tànana ihany koa. SAINGY hitanay ny fahasarotana sasany rehefa nanindry ny bokotra izay misy ny silikona. Manokana, ny bokotra hidin-trano, izay miaraka amin'ny fonony dia mila manery ianao angamba mafy kokoa noho ny nandrasana hampiasana azy.
Ao amin'ny ambany amin'ny telefaona no ahitantsika ny mikrô, mampifandray mpampitohy, amin'ity tranga ity USB Type-Cary ny mpandahateny. Tsikaritray tsy fisiana manan-danja, ny mpampitohy jack mini. Ny wkworld S8 dia tsy mandeha amin'ny jack headphone quintessential. Zavatra izay heverin'ny maro fa mihemotra fa tsy mialoha ..
ny endriny dia vita amin'ny titanium
Pikantsary 5,99-inch goavambe
Isaky ny smarpthone vaovao hitantsika no ahitantsika izany hadino tokoa ireo 5 santimetatra. Na ny efijery 5,5-inch aza dia mihamala kely. Mitombo hatrany ny haben'ny efijery ary manaporofo izany mazava tsara izany. Ny wkworld S8 mitaingina efijery 5,99 santimetatra tafiditra tanteraka ao anaty vatana tsy lehibe noho ny finday misy efijery 5-inch.
Manana efijery miaraka aminay izahay 18: 9 endrika HD feno. Manana izany Fiarovana ny Corning Gorilla Glass vera faha-XNUMX. Ary miaraka a 2160 x 1080 vahaolana izany dia hahatonga antsika hankafy ny kalitao atolotray amin'ny efijery iray manontolo nataon'i LG.
Ny vkworld S8 dia manamafy ny teoria fa mihabe hatrany ny fampiasantsika ireo finday avo lenta hampiasa andiana na sarimihetsika. Noho io antony io, ny efijery misy vahaolana avo lenta sy tsara habe dia ankafizin'ny mpampiasa hatrany. Afaka mieritreritra ho an'ny sasany ny opt ho an'ny terminal iray na hafa.
Ny fampisehoana vkworld S8 dia misy a mijery zoro hatramin'ny 178 degre. Ary ny hakitroky ny 403 teboka isaky ny santimetatra. Ary manolotra anay angona iray izay vitsy ny mpanamboatra misafidy ny hampiharihary amin'ny haavon'ny hazavana sy ny famirapiratana. Tonga ny vkworld S8 Mamirapiratra 550. Midika izany fa tsy hanana olana amin'ny famakiana na amin'ny fampiasana finday amin'ny jiro lehibe eny ivelany isika.
Araka ny hitantsika, efijery tena tsara amin'ny kalitao, ny famahana ary ny habeny. Data izay avo lenta raha ny amin'ny fifaninanana eo amin'ny tsenan'ny Smartphone antonony masiaka. Ary ao anatin'iza ny tahan'ny fisian'ny tontonana eo anoloana hatramin'ny 91% toy ny be eo amin'ny besinimaro.
Izahay dia mijery ao anatin'ny vkworld S8
Fotoana izao hijerena izay atolotray antsika momba ny fahefana ity Smartphone ity. Ary tsy maintsy milaza isika fa tsara ny mihazakazaka amin'ny angon-drakitra toy izany amin'ny fitaovana izay tsy ao an-tampon'ny ambaratonga ny priori. Hitanay fa tamin'ny volana farany tamin'ny 2017 dia toa tsy dia nisy loatra ny RAM 2 GB ho an'ny telefaona iray. Ary toy ny ankamaroan'ny mpanamboatra azy dia nisafidy ny hanitatra izany fahatsiarovana izany izy.
Ny vkworld S8 manokana dia nanapa-kevitra ny hamerina azy io. Hitantsika araka izany ny a Fahatsiarovana RAM 4 GB. Miaraka amin'ny a ROM 64GB ho an'ny fitehirizana manomboka izy ireo dia manao mpivady mety. Isa tsy azo iadian-kevitra ao amin'ny Smartphone izay hita eo amin'ny vidiny efa ho ny ampahefatry ny vidin'ny avo lenta amintsika.
Mba hiasa tanteraka ny zava-drehetra, ny vkworld S8 dia miasa eo ambanin'ny processeur miaraka amin'ny fahamendrehana mihoatra ny voaporofo. ny MediaTek 6750, processeur izay manamafy ny orinasa toa ny Huawei, LG, Meizu na Doogee mbola matoky, ankoatry ny hafa. Ary miantoka izany fa ny singa rehetra amin'ny telefaona dia manome fahombiazana faran'izay betsaka tsy misy fanjifana angovo be loatra. Octa-core izay mbola misy amin'ny finday avo lenta maro noho ny valiny tsara.
Raha ny momba ny rafitra miasa, mazava ho azy, manana ny kinova farany an'ny android. Ary faly izahay mahita fa tsy tonga miaraka amina sosona fanaingoana mahazatra azy io. Noho izany dia afaka mahazo fidirana amin'ny sehatra sy fanaraha-maso rehetra omen'ny Android antsika isika. Fahombiazana tsy misy fisalasalana, ny Android "madio" no safidy tsara indrindra raha tiantsika ny hisoroka ny fandidiana eo anelanelan'ny fanapahana na ny fanafanana be loatra tsy ilaina.
Noho izany dia eo alohanay isika Smartphone iray izay mahatalanjona amin'ny asany rehetra. Izahay dia efa nanandrana lalao tamin'ny alàlan'ny sary mitaky. Fampiharana filalaovana sarimihetsika sy filalaovana andiany. Ary ny mpitety GPS. Ny valiny dia tsara tamin'ny fitsapana rehetra. Ny multitasking dia tsy olana. Fitaovana iray izay miasa tsara amin'ny fitsapana rehetra natao, ary marina izany nefa tsy mahatsikaritra ny fiakaran'ny maripana.
Araka ny hitantsika, ny avo lenta dia tsy maintsy mametraka ny batterie maika. Isaky ny fitaovana vaovao hihaonantsika dia hitantsika fa mihombo hatrany hatrany ny elanelam-potoana raisina. Angamba ny fahazoana finday avo lenta heverina ho "ambony" dia tsy dia hahasoa firy rehefa mandeha ny fotoana. Nandritra ny fotoana vitsivitsy izao, ny fahasamihafana izay afaka hitantsika eo amin'ny iray sy ny iray hafa dia mihakely ary kely kokoa.
Datasheet Vkworld S8
efijery 5.99 Corning Gorilla Glass LG - endrika 18: 9 Full HD
processeur MediaTek 6750T 1.5 GHz Octa - Core
fitehirizana 64 GB azo itarina
Fakan-tsary Rear Fakan-tsary indroa 16 Mpx + 5 Mpx
bateria 5.500 XNUMX mAh - manohana ny famandrihana haingana
habe 75.00 mm x 158.00 mm x 8.5 mm
lanja 247 h
vidiny 143.99 €
Vidio eto ny vkworld S8 amin'ny vidiny mirary
Ny fakantsary an'ny vkworld S8
Tahaka ireo mpanodina, ny mpanamboatra finday avo lenta dia manandrana manatsara ny fakan-tsariny. Ny fahafantarana fa amin'ireo mpitia tambajotra sosialy, ny fananana fakan-tsarimihetsika mahay dia mety ho tsy misy na inona na inona. Hitanay ny fomba ny laza mahatsiravina nananan'ny fakantsary finday sinoa taona vitsy lasa izay dia nihena teo amin'ny tantara.
El vkworld S8 dia manana fakantsary roa manam-pahaizana aoriana. Fitaovana lantera roa misy famahana 16 Mpx sy 5 Mpx izay mitambatra dia afaka manome valiny tena tsara. Afaka mahazo sary miaraka amina ambaratonga avo lenta isika, afaka taratra ny loko amin'ny toerana madio indrindra. Ary ny ambaratonga tsara dia tena tratra ihany koa amin'ny fifandanjana fotsy.
Amin'ny sary nalaina tamin'ny hazavana voajanahary tsara dia hitantsika fa tena tsara ny fifantohana. Ary ny mifanohitra amin'ny alokaloka samihafa amin'ny loko iray dia tsy olana ny manome sary maranitra.
Misaotra ny fakantsary roa azontsika atao ny maka sary misy ilay sary malaza malaza. Manasongadina ny lohahevitra eo alohan'izay ary manaparitaka moramora ny lafika ho endrika kanto sy matihanina. Y Azontsika atao koa ny misafidy karazana maody an-tsehatra izay fakan-tsary fakan-tsary mandeha ho azy. Landscape, fety, morontsiraka, sinema, lanezy sy ny maro hafa.
Ao aminy ampahany aloha nahita iray izahay Fakan-tsary izay misy famahana ny 13 Mpx. Ny selfie-tsika dia hahatratra ny haavon'ny kalitao mitovy amin'ny sary nalaina tamin'ny fakantsary lehibe. Saingy tsy azontsika atao ny misoroka ny fitaomana indray izany ny toerana misy azy dia hadisoana betsaka. Tsy voajanahary ny fanesorana ny tananao amin'ny toerana itazonantsika ny telefaona haka sary tsy misy rantsantanana na ampahany amin'ny tanana mivoaka.
Rehefa maka sary amin'ny fakantsary eo aloha isika dia afaka misafidy ny maody hatsaran-tarehy. Tsy hanana fialantsiny intsony ianao amin'ny tsy fanaovan-tsoa. Eo am-pelatanantsika katalaogin'ny vokatra rehetra hanatsarana (raha azo atao) sary selfie. Hatsaran-tarehy, poloney, mamelatra, manafotsy na maso lehibe. Iza no mila mpandidy?
Ao amin'ny sary amin'ny fampiasana ny zoom izay farany ambony dia hitantsika fa tsy pixelated ny sary farany. Fantatsika tsara ireo singa amin'ny fisamborana. Ary miaraka amin'ny hazavana voajanahary tsara dia azo ekena ny vokatra, raha ny zoom optika.
Batterie mba tsy hijanona ny gadona
Rehefa mahita Smartphone miaraka amin'ny efijery lehibe isika dia tena ilaina ny fizakantenan'ny solo-batany. Ny fanjifana angovo ateraky ny fampiasana maharitra amin'ny efijery efa ho 6 santimetatra ny habeny dia avo dia avo. Noho izany dia sarotra ny manohana mandritra ny tontolo andro amin'ny batterie mahazatra. Ny vkworld S8 dia nandray an-tanana an'io antsipiriany io.
Manana bateria 5.500 XNUMX mAh izahay. Ampy ny sarany ka aza manahy momba ny charger mandritra ny tontolo andro ianao. Raha ny tena izy, Miankina amin'ny fampiasantsika ny telefaona hatrany, afaka maharitra roa andro isika nefa tsy ampidirina ao mampiditra. Fitsaboana ho an'izay mandeha tontolo andro miaraka amin'ny tariby.
Tamin'ny fampiasana maharitra ny fitaovana mandritra ny andro iray manontolo dia afaka nampiasa azy io maimaim-poana aho mandra-pahatongan'ny tolakandro tolakandro. Zavatra tsy azo eritreretina amin'ny fitaovana hafa na dia kely aza ny efijery. Ny bateria wkworld S8 dia natao hiatrehana ny fampiasana maharitra ary mba hahafahantsika manadino tanteraka mandritra ny andro ny momba ny fakana izany.
Amin'ny maha ampahany ratsy azy, ny fananana batterie lehibe dia miraika mivantana, farafaharatsiny farafaharatsiny, ho fa ny telefaona dia manana lanja mavesatra kokoa. Ary koa amin'ny inona ara-batana ny terminal mahazo sentimetatra vitsivitsy ny hateviny Misy hevitra roa mifanipaka momba an'io. Amin'ny lafiny iray, misy ireo izay maniry ny faharetana sy ny fizakan-tena, mihevitra ny lanjan'ny fitaovana ho ratsy kely kokoa.
Saingy etsy ankilany dia misy ireo izay mihevitra ny lanjany avo lenta amin'ny telefaona ho tsy fahombiazana lehibe. Ny fahafahan'ny finday finday avo lenta no antony lehibe mahatonga izany. Ary ny fihazakazahana anaty telefaona manana lanja mavesatra indroa dia tsy azo atao. Amin'izay mba misy ireo izay maniry ny tsy maintsy hameno ny telefaona isan'andro ho valin'ny lanjany maivana kokoa.
Amin'ny ankapobeny, ny mpampiasa rehetra dia manaiky fa maniry RAM sy ROM bebe kokoa izy ireo. Fanapahana sary sy fakan-tsary avo kokoa. Mbola fizakantena lehibe kokoa aza. Saingy sarotra ny mametraka ny mpampiasa rehetra amin'ny fifanarahana amin'io lafiny io. Miatrika lanja manohitra ny fizakan-tena izy ireo. Ny vkworld S8 dia tena hanome fahafaham-po ireo izay mitady bateria bebe kokoa ambonin'ny zavatra rehetra.
Toa tsara ny wkworld S8
Ny faritra fanamafisam-peo dia nanjary tsy dia zava-dehibe loatra amin'ny fanamarihana finday. Ary angamba satria zavatra tsy raharahaintsika io. Izany hoe iray amin'ireo lafin-javatra izay tsy itandremanay kely akory. Raha misy telefaona tena tsara manana feo mpandahateny somary malahelo izay tsy zavatra tokony hampanahy.
Mampiasa fitaovana ivelany kokoa izahay hihainoana mozika na hijerena horonan-tsary. Mampalahelo fa efa mahazatra ny mahita mpandahateny tokana amin'ny smartphone rehetra eny an-tsena. Ary araka ny hitantsika hatramin'ny ela, ny feo dia lafiny iray izay nivoatra kely na tsy nisy.
Ny vkworld S8 amin'ny lafiny feo atolony dia telefaona iray hafa. Raha ny tena izy dia sarotra be ny mampitaha ny Smartphone amin'ny data hafa miaraka amin'ny data. Ary izany dia satria tsy manana data. Ny mpanamboatra matetika dia manary na dia ny watts herinaratra aza avy amin'ny mpandahateny azy. Ary ny haavon'ny fikirakirana eo amin'ny sehatry ny fanamafisam-peo dia matetika aotra.
Amin'ity tranga ity, aorian'ny fitsapana azy amin'ny toe-javatra samihafa dia afaka manamafy izany isika Ny haavon'ny haavon'ny feo avo indrindra dia mbola mazava. Tsy miolakolaka na dia mitendry mozika miaraka amina bass accentuated aza. Manao ny asany lavorary izy, tsara ny feo. Tsy azo ovaina foana, fa mifanaraka amin'ny andrasana.
Ankehitriny ireo mpandahateny azo entina dia ampiasaina be loatra, ary na dia kely aza dia afaka manome hery sy kalitao tsara. Tsy ho tsara ve raha eritreritra mafy ny hanolotra Smartphone izay ho mpilalao ihany koa? Telefaona afaka mamoaka herinaratra ampy handrenesana feo tsara eny ivelany. Io tenany io dia mety ho lasa zava-baovao eo amin'ny tsena. Tonga soa ianao mpanamboatra.
Tsara homarihina ao amin'ny sehatry ny feo ny tsy fisian'ny seranan-tsambo mini jack. Ny seranana izay nampifandraisintsika ny headphones saika hatramin'ny fiandohan'ny telefaona finday. Rehefa nanapa-kevitra ny hanafoana azy i Apple, miaraka amin'ny iPhone 7, dia fotoana fohy vao nanaraka ny hafa. Ny vkworld S8 dia tsy manana an'ity fidirana ity, ary mila milaza aho fa amin'ny tranga sasany dia tsy hita izy io.
Noho izany tsy azontsika atao ny mihevitra ny fivoarana iray hanafoanana ny seranana izay mbola mahasoa tanteraka ankehitriny. Ny mpanamboatra dia mampiditra adaptatera ao anaty boaty mba hahafahantsika mampifandray ny headset rehetra amin'ny mpampitohy USB karazana C. Nefa misy zavatra tsy haintsika intsony: emihaino mozika raha manana ny finday izahay. Ary indrisy fa zavatra vita matetika.
Fiarovana sy teboka malemy
Amin'ity fotoana ity dia hitantsika ny iray amin'ireo lafiny izay nanambanan'ny mpanamboatra loharano bebe kokoa. Efa mahazatra antsika ny mpamaky ny rantsan-tànana. Ary ny fomba nanamboaran'ny orinasa tsirairay azy ho azy manokana tamin'ny fanovana ny endrika na ny toerana misy azy. Saika ny maodely finday vaovao rehetra dia efa manana ny mpamaky ny dian-tànana.
Alohan'ny hisehoan'ireo mpamaky ny dian-tànana ireo dia tsy maintsy nifantoka tamin'izay nisy izahay. Saika hatramin'ny nanombohan'ny Android Operating System, ny finday dia afaka mametraka lamina mamoha. Na kaody isa izay, miaraka amin'ny lamina, no ampiasaina hidirana amin'ny menio lehibe amin'ny Smartphone.
Tamin'ny taona lasa Hitanay ny fomba nampidiran'ny orinasa matanjaka indrindra rafitra fiarovana vaovao ho an'ireo fitaovanao "ambony" indrindra. Teknolojia somary novela izay mamela antsika hamaha ny findaintsika amin'ny tarehy fotsiny. Ary tsy mahagaga, indray mandeha indray, fa maro no nanomana ny haka tahaka an'io teknolojia io.
Ny mpitsikilo tarehy: mila fanatsarana
Rehefa mamaky telefaona voalohany isika dia efa zatra manontany sy manitsy ny fanamboarana azy voalohany. Fa nientanentana indrindra izahay, raha vao voamarina ny dian-tananay. Ny vkworld S8 dia mangataka fanekena endrika hanokatra ilay fitaovana.
Tokony holazaintsika izany raha ny marina dia tena tsara ny fahatsapana. Ento manakaiky ny fitaovana ny tarehinao mamoha somary haingana. Mandalo ny tsy fahazoana aina amin'ny toerana fakantsary eo aloha, amin'ny fijerena tsotra azy fotsiny dia manokatra ny telefaona. Fandrosoana sy zavatra iray izay ampiasantsika azy voalohany tahaka ny be.
Saingy aorian'ny fitsapana dia mandreraka tanteraka izahay amin'ny fampiasana an'ity haitao ity. fanekena tarehy hanokatra ity telefaona ity. Araka ny efa nolazainay fa mandeha tsara izy ary mandeha haingana. Ny olana dia tsy vitan'ny fanidiana ny sisiny voasokitra fotsiny izy io. Tao anatin'ny fitsapana olona 10, ny telo tamin'izy ireo dia afaka nanokatra ny tarehiny tamin'ny tarehiny. Ary tsy nisy nitovy ny iray tamin'ireo afaka nanokatra azy io.
Voalohany indrindra, nieritreritra izahay fa ny sary nalain'ny fitaovana hanekena ny tarehy dia tsy nalaina tamin'ny toe-jiro tsara. Saingy taorian'ny namerenany ilay sary tamin'ny toe-javatra tena mety indrindra, dia mbola hita ihany ny fanekena ny tarehy Tena tsy marina. Lafiny iray noho izany betsaka ny azo diovina. Izay te hahafanta-javatra ary mety ho tsara, fa amin'izao fotoana izao dia zavatra izany tena tsy azo tanterahina.
Ny tsara sy tsara indrindra amin'ny vkworld S8
Ny zavatra voalohany sy manaitra indrindra dia ny ny haben'ny efijeryo. Fatra fandrefesana izay vitan'ny a tsara fanapahan-kevitra. Ny efijery misy azy dia mahatonga ny wkworld S8 ho Smartphone henjana amin'ny filalaovana atiny multimedia.
Ny fizakantena natolotry ny a Bateria 5500 mAh izy io dia mifanaraka amin'izay hain'ny efijery 5,99 santimetatra afaka laniana. Ny fampiasana an-tariby ny finday, ny bateria dia afaka manolotra antsika hatramin'ny roa andro feno amin'ny fiainana.
Ao amin'ny fizarana momba ny zavatra hatsaraina dia nampiditra lafin-javatra maro izahay. Tsy midika izany fa ny vkworld S8 dia tsy Smartphone iray mendrika izany. Mifanohitra amin'izany no izy, telefaona tena soso-kevitra izy, indrindra fa ny fahalalana ny vidiny izay ihetsehany.
Tianay ny manamarika fa iray amin'ireo lafiny lehibe hanatsarana ny toerana fakantsary eo anoloana. Hitanay tamin'ny olona voalohany ny fomba, farafaharatsiny mba tànana ankavanana, sarotra ny maka sary nefa tsy mampiseho rantsantanana na ampahany amin'ny tanana. Mahamenatra ny fiheverana fa miatrika fakan-tsary manara-penitra izay rahona isika noho ny tsy fametrahana azy amin'ny toerana milay kokoa.
Ny lanjany Mbola mahatsiaro sakana ho an'ny maro aho. Ary ny ampahany betsaka amin'ny mpanjifa dia vonona ny hamoy ny fizakan-tena mandritra ny ora maro ho an'ny lanjany mavesatra kokoa.
Averinay indray izany azo hatsaraina ny toerana misy ny mpamaky ny rantsantanana. Ny fananana azy akaiky ny mason'ilay fakantsary dia mahatonga ny rantsantananantsika hiafara amin'ny fandotoana azy imbetsaka.
toerana fakantsary eo anoloana
tsy fankasitrahana ny tarehy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Avereno jerena ny vkworld S8
Finday tsara izay mety ilaina ho an'ny mpampiasa antonony, saingy ny efijery dia tsara sy be fanina, loza ny Bluetooth, mijanona eo afovoan'ny resaka izy ary manana fitaovana maromaro mifangaro ianao, mampihena izany.
Ny charger manokana dia tena tsara, fa raha manova ny charger ianao dia mandihy ny tariby ary mivoaka ary mihemotra miadana be.
Notehiriziko ho toy ny finday vonjy maika